YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, March 15
NLD.LA.JB မှဂျပန်ရောက်မြန်မာများသို့ အရေးပေါ်အခြေအနေနိုးဆော်ချက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/15/20110အကြံပြုခြင်း
Human Rights Council holds Interactive dialogue with Special Rapporteur on Situation of Human Rights in Myanmar
The Human Rights Council inamidday meeting today held an interactive dialogue with the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar.
Tomas Ojea Quintana, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, said this was an important point in the political transition in Myanmar, with the legislative elections taking place in November last year, and the convening of the national parliament in January this year. The Government had announced the final stage of the seven-step roadmap to democracy and many people were hopeful that this transition would provide an opportunity for positive change. Myanmar was urged to see genuine national reconciliation through an inclusive process, without which the democratic transition would be incomplete. Without national reconciliation the people of Myanmar would continue to face uncertainty and militarization that drained resources of the country.
The deprivation of economic, social, and cultural rights affected almost all the people of Myanmar, not only those who had been victimized by the long years of civil conflict or those who dared to speak out politically, said the Special Rapporteur. Failure to address systematic discrimination and inequities in the enjoyment of those rights would undermine efforts to buildabetter future for the people of Myanmar. The Special Rapporteur had decided to focus on the right to education because not only was itacrucial enabling right, it was also essential in buildingastrong democracy. The new Government of Myanmar needed to address the widespread and systematic abuse of human rights asamatter of utmost urgency. The situation of grave human rights violations remained ongoing today in Myanmar. The new Government hadaformidable task of forgingafunctioning democracy out of decades of military rule. The people of Myanmar deserved the support of the international community throughout this process.
Myanmar, speaking asaconcerned country, said that multi-party general elections were peacefully convened on7November 2010 in Myanmar and the country was now in the process of adoptingamulti-party democratic system. The positive political developments and changes vividly showed the commitment of the Myanmar Government, not only in fulfilling the aspirations of its people but also in responding to the wishes of the international community who wanted to see Myanmar asademocratic, stable and prosperous State. Despite their belief that the mandate of the Special Rapporteur was inappropriate, the Government of Myanmar had cooperated by extending invitations to the Special Rapporteur to see the true situation in Myanmar. The report of the Special Rapporteur contained allegations against the voting process of the 2010 elections in Myanmar. Myanmar totally disagreed with these allegations, because, as mentioned earlier, nothing was done contrary to the law in the process of the elections. Secondly, the allegation against the Government on imposing restrictions on parliamentarians was also untrue. The Government’s efforts in implementing equitable education throughout the country should not be ignored. Myanmar would continue to work in cooperation with the Special Rapporteur by accepting visits, providing access and relevant information. In reciprocity, they expected that the reports of the Special Rapporteur be based on principles of independence, impartiality, objectivity and optimism.
In the interactive dialogue, speakers said that Myanmar should release political prisoners and engage in dialogue with political opposition groups. The recent general elections were not conducted inafree and fair manner. What specific measures could be implemented to help promote democracy and freedom of expression? The report paintedagrim picture of the human rights tragedy in the country. Systematic human rights abuses continued. The Special Rapporteur cited an increase in the number of prisoners of conscience in the run up to the elections. Thousands of prisoners continued to be held in deplorable conditions and tens of thousands of ethnic minorities were fleeing into neighbouring countries to avoid persecution. The liberation of Aung San Suu Kyi should not make the international community forget thousands of other political prisoners who were imprisoned in inhumane conditions and suffered torture and degrading treatments.
Other speakers said that despite mixed impressions of the international community about the state of affairs in Myanmar, the progress, particularly the holding of national elections, must be acknowledged. It was hoped that the post-elections process would lead to positive changes and speakers urged the new Government to ensure an inclusive path towards democratisation and national reconciliation. The imposition of selective resolutions and mandates for countries of the south was rejected and speakers opposed the path taken of sanctions and confrontation. The release of Aung San Suu Kyi from house arrest last November was welcomed. Speakers rejected politicized country specific mandates, saying that this would lead to divisions and distrust among States. Politicized country specific mandates in the Council had to be eliminated forever.
Speaking in the interactive dialogue were Canada, Thailand, Cuba, United States, France, Republic of Korea, Japan, China, Maldives, United Kingdom, Algeria, Slovakia, brazil, European Union, Indonesia, Switzerland, Czech Republic, Norway, New Zealand, Cambodia, Democratic People’s Republic of Korea, Slovenia, Lao People’s Democratic Republic, Viet Nam, and Australia.
The following non-governmental organizations also took the floor: Asian Legal Resource Centre, Asian Forum for Human Rights and Development, Human Rights Watch and Amnesty International.
The Council today is meeting from9a.m. to6p.m. It will next consider follow-up of its Special Sessions on Côte d’Ivoire and on Libya.
The Progress Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, (A/HRC/16/59), notes that Myanmar undertook national elections for the first time in over two decades on November 2010. One week later, Daw Aung San Suu Kyi was released unconditionally upon the end of her house arrest term. The new national parliament began meeting on 31 January 2011. Amidst much uncertainty, there appears to be some cautious optimism that positive change may be possible. Among those changes that the people of Myanmar dare to hope for is the realization of their economic, social and cultural rights. For this reason, the Special Rapporteur begins to address in the present report the subject of economic, social and cultural rights, starting with the right to education.
Presentation of Report by Special Rapporteur on Situation of Human Rights in Myanmar
TOMAS OJEA QUINTANA, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, said this was an important point in the political transition in Myanmar, with the legislative elections taking place in November last year, and the convening of the national parliament in January this year. The Government had announced the final stage of the seven-step roadmap to democracy and many people were hopeful that this transition would provide an opportunity for positive change. Myanmar was urged to see genuine national reconciliation through an inclusive process, without which the democratic transition would be incomplete. Without national reconciliation the people of Myanmar would continue to face uncertainty and militarization that drained resources of the country. The deprivation of economic, social, and cultural rights affected almost all the people of Myanmar, not only those who had been victimized by the long years of civil conflict or those who dared to speak out politically. Failure to address systematic discrimination and inequities in the enjoyment of those rights would undermine efforts to buildabetter future for the people of Myanmar. The Special Rapporteur had decided to focus on the right to education because not only it wasacrucial enabling right, but because it was also essential in buildingastrong democracy. The new Government of Myanmar needed to address the widespread and systematic abuse of human rights asamatter of utmost urgency. The international community had been waiting patiently for Myanmar to start taking those necessary measures, and needed strong signals that the new Government intended to change the policies and practices of the old Government. The new Government needed to confront the need for truth, justice and accountability.
The situation of grave human rights violations remained ongoing today in Myanmar. The Special Rapporteur had met with refugees and asylum seekers from different regions who suffered abuses such as forced labour, extrajudicial executions, sexual and gender-based violence, discrimination and others. They had fled to Malaysia where they found life difficult as they had no access to legal employment and their children did not have access to formal education, and many lived in fear for the families left behind. The Malaysian Government was working with the United Nations High Commissioner for Refugees in addressing refugee issues on humanitarian grounds. There was an extra-territorial dimension to the human rights problem in Myanmar and the countries in the region hadaparticular interest in persuading the Government of Myanmar to take necessary measures for the improvement of its human rights situation. Estimates of the numbers of Myanmar people who had fled to neighbouring countries were in the millions. The new Government hadaformidable task of forgingafunctioning democracy out of decades of military rule. The people of Myanmar deserved the support of the international community throughout this process. The new Government must change the culture of impunity that had allowed for human rights abuses to go unchecked and unaccounted for, and must start addressing its responsibilities in promoting, protecting and fulfilling the economic, social and cultural rights of the people of Myanmar. The international community was ready to assist but also to take appropriate decisions to help guarantee human rights in Myanmar.
THANT KYAW (Myanmar), speaking as concerned country, said that multi-party general elections were peacefully convened on7November 2010 in Myanmar and the country was now in the process of adoptingamulti-party democratic system. Thirty-seven political parties and 82 independent candidates, making the total number of contestants 3,000, participated in the elections to run for the seats in the Pyithu Hluttaw (House of Representatives), Amyotha Hluttaw (House of Nationalities) and for the 14 State and Region Hluttaws. The participation of all registered political parties and individuals in the elections had been conducted in the context of the Electoral Law which had fully adhered to their right to peaceful campaigning and media. The vote casting and vote counting in all constituencies had been conducted in front of the contestants and the people. The advance voting had been carried out within the context of the Electoral laws and Bylaws. The positive political developments and changes vividly showed the commitment of the Myanmar Government, not only in fulfilling the aspirations of its people but also in responding to the wishes of the international community who wanted to see Myanmar asademocratic, stable and prosperous State.
Despite their belief that the mandate of the Special Rapporteur was inappropriate, the Government of Myanmar had cooperated by extending invitations to the Special Rapporteur to see the true situation in Myanmar. The report of the Special Rapporteur contained allegations against the voting process of 2010 elections in Myanmar. Myanmar totally disagreed with these allegations, because, as mentioned earlier, nothing was done contrary to the law in the process of the elections. Secondly, the allegation against the Government on imposing restrictions on parliamentarians was also untrue. They were completely free to raise proposals and questionnaires to the national governing bodies, in the interests of their local constituencies. Allegations against the Government for failing to implement the education policy were also misleading. The Government’s efforts in implementing equitable education throughout the country should not be ignored. In conclusion, Myanmar reiterated their desire to cooperate with the United Nations in the field of human rights. In this regard, they would continue to work in cooperation with the Special Rapporteur by accepting visits and providing access and relevant information. In reciprocity, they expected that the reports of the Special Rapporteur be based on principles of independence, impartiality, objectivity and optimism.
ALISON LECLAIRE CHRISTIE (Canada) thanked the Special Rapporteur for his report and supported his proposal for the establishment ofaCommission of Inquiry. Canada also urged the Myanmar regime to release political prisoners and to engage in dialogue with political opposition groups. The recent general elections were not conducted inafree and fair manner and Canada noted the Special Rapporteur’s concerns that parliamentarians remained restricted and limited. Canada asked what specific measures could be implemented to help promote democracy and freedom of expression. Finally, Canada expressed its disappointment that the Special Rapporteur had still not received an invitation to visit Myanmar despite continuous requests in the last year. In this regard, Canada asked the Special Rapporteur whether or not he expectedafavourable response soon to his requests foracountry visit.
SEK WANNAMETHEE (Thailand) said that despite mixed impressions of the international community about the state of affairs in Myanmar, the progress, particularly the holding on national elections, must be acknowledged. The Thai Government hoped that the post-elections process would lead to positive changes and urged the new Government to ensure an inclusive path towards democratisation and national reconciliation. Thailand was advocating for Myanmar to strengthen its engagement with the Human Rights Council and urged the Government to consider positively the visit requested by the Special Rapporteur in order to demonstrate its willingness to cooperate with the Council. Human rights promotion and protection in Myanmar must be part of the process of democratisation and national reconciliation and this could be gradually achieved through human resource development and education. Thailand viewed that the rights to development and political rights were equally important and complementary and the international community should consider how best to help ease the hardship placed upon the people of Myanmar asaresult of economic sanctions. International cooperation and assistance, particularly at the grass-roots levels and in socio-economic and development and humanitarian areas, remained critical and Thailand remained committed to continue its cooperation with all parties to promote sustained political and socio-economic development in Myanmar.
JUAN QUINTANILLA (Cuba) said that asaposition of principle Cuba rejected the imposition of selective resolutions and mandates for countries of the south and Cuba opposed the path taken of sanctions and confrontation. The strengthening of the human rights situation requiredalong strategy of development and cooperation and sanctions only contributed to worsening the differences and problems. The human rights situation in Myanmar had already been subjected to review by the Universal Periodic Review’s Working Group and the report would be considered at the seventeenth session of the Human Rights Council in June. It was according to that scenario that the international community should giveafollow up to the situation of human rights.
MARGARET WANG (United States) said the United States welcomed the report of the Special Rapporteur and thanked him for the work he had done. The United States was disappointed that the Special Rapporteur had not been invited to the country despite his requests since February 2010. The report paintedagrim picture of the human rights tragedy in the country. Systematic human rights abuses continued. The Special Rapporteur cited an increase in the number of prisoners of conscience in the run up to the elections. Thousands of prisoners continued to be held in deplorable conditions and tens of thousands of ethnic minorities were fleeing into neighbouring countries to avoid persecution. Democratic Governments had to answer to their citizens regarding the distribution of national resources, prison conditions, law enforcement issues and the general respect for human rights. Finally, the Universal Periodic Review process offeredachance to address some of these issues but, unfortunately, the Government of Myanmar rejected many thoughtful recommendations, including recommendations to combat impunity and increase cooperation with the United Nations.
JEAN BAPTISTE MATTEI (France) said that the first elections in Myanmar were held in conditions that could not be considered free and democratic. France asked the opinion of the Special Rapporteur on the possibilities ofagenuine democratic transition. The liberation of Aung San Suu Kyi should not make the international community forget thousands of other political prisoners who were imprisoned in inhumane conditions and suffered torture and degrading treatment. France called for their immediate release and for respect of freedom of expression in Myanmar. Massive human rights violations still occurred in Myanmar and France said thatacredible and independent investigation was needed now more then ever. France also called on Myanmar to put in place immediate measures to fight against impunity and asked the opinion of the Special Rapporteur on the role the international community could play in this regard.
PARK SANG-KI (Republic of Korea) said the Republic of Korea recognized that the Government of Myanmar was in the final stage of the seven-step roadmap to democracy, given that the elections were held last November and the first session ofanew Parliament was convened in January. The Republic of Korea also welcomed the release of Aung San Suu Kyi from house arrest last November. In this regard, the Government of the Republic of Korea noted that the Special Rapporteur mentioned in his report that, amid much uncertainty, there appeared to be some cautious optimism that positive change may be possible. To this end, they believed that political will on the part of the Myanmar Government was vital. The Government of the Republic of Korea joined the Special Rapporteur in recommending that the Myanmar Government take seriously the wide-ranging calls foramore inclusive political process and to find the means to include all parties in the national reconciliation and transition processes.
KENICHI SUGANUMA (Japan) said Japan welcomed the submission of the report and the presentation of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar. Japan said that it was unfortunate that the recent general elections did not take place inafree and fair manner. Japan strongly urged the Government to release the thousands of prisoners of conscience who had been detained for opposing the current regime. Japan also deeply regretted that the Special Rapporteur had not been extendedavisit, despite numerous requests in the past year. The delegation took note of the particular focus on education in the report of the Special Rapporteur. Education was clearly essential to any healthy society and the Government of Myanmar had an obligation to increase the access and availability of education in their country, including human rights education.
JIANG YINFENG (China) said China welcomed the progress made in the promotion and protection of human rights by the Government of Myanmar. Last November, Myanmar had held general elections and the process had been smooth and successful. Those developments should be welcomed and recognised. China urged the Human Rights Council to give an impartial assessment of the progress made in Myanmar in order to encourage this country. Asafriendly neighbour of Myanmar, China hoped it maintained its stability and achieved socio-economic development. In this sense, China was ready to provide assistance to Myanmar, together with the international community.
AISHATH LIUSHA ZAHIR (Maldives) said the Maldives supported the democratic transition process in Myanmar, as guided by the roadmap. They believed that the Myanmar authorities should be encouraged and supported in their stated aim of transforming the country intoafunctioning, liberal democracy, with strong human rights safeguards. However, the Maldives also believed that Myanmar had to be honest, open and transparent in the implementation of the reform roadmap, and unfortunately Myanmar was currently failing in this regard. The Maldives recent democratization experience demonstrated that trust was by far the most important commodity duringaperiod of transition. Trust and confidence were needed between domestic political actors, and between the authorities and the international community. The Maldives believed that the Special Rapporteur’s report contained useful recommendations such as the establishment ofamore inclusive political process, to ensure that the democratization programme ended up as more than words onapiece of paper. They urged the Myanmar authorities to implement these recommendations in full.
PETER GOODERHAM (United Kingdom) said the United Kingdom expressed its sincere appreciation for the continued commitment of the Special Rapporteur to the investigation of the human rights situation in Burma, in spite of the refusal of the military regime to allow him to enter the country over the last twelve months. The United Kingdom fully supported the Special Rapporteur’s calls for truth, justice and accountability to be meaningfully addressed. The delegation also shared the Special Rapporteur’s regret that political and civil freedoms, including freedom of expression, continued to be denied. The United Kingdom agreed with the Special Rapporteur’s assessment that the 2010 elections were not credible and would be interested to better understand why he believed that prospects could be better in 2015.
IDRISS JAZAIRY (Algeria) said that Algeria had been encouraged by the approach recommended by the Special Rapporteur on Myanmar, based on seeking dialogue and cooperation with the country. Myanmar had enteredanew historic phase with the adoption of the new Constitution in 2008 and the national elections in 2010. Algeria hoped that this would mean the transition to democracy and the national reconciliation. Several recommendations formulated by the Special Rapporteur meant that major efforts needed to be made by Myanmar in the promotion and protection of human rights. For tangible and solid results to be achieved, the Special Rapporteur must establishalasting relationship with the authorities, based on trust.
BRANISLAV LYSAK (Slovakia) said that Myanmar was atacritical juncture. Slovakia regretted that the Special Rapporteur had not been able to enter the country since February 2010 and called upon the Government of Myanmar to facilitate his visit asamatter of priority. For the same reasons, Slovakia considered that the continuation of the mandate was imperative. Slovakia said that there had been lots of expectations of the international community prior to the constitution drafting process as well as following the elections, the country’s first after more than 20 years. The process’s credibility had been seriously undermined from the very beginning. Of concern were the disproportionate costs as well as direct imprisonment threats aimed to discourage those seeking electoral justice. Slovakia concurred with the Special Rapporteur that the November 2010 elections failure to meet international standards would pose further challenges for country’s transition.
MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO (Brazil) said Brazil highlighted the timely attention given by the Rapportuer to the promotion of economic, social and cultural rights in Myanmar. Recommendations contained in the report to strengthen international cooperation for the promotion of human rights in Myanmar were also laudable. Brazil would like to ask the Rapporteur about the impact of cooperation activities undertaken by United Nation agencies in Myanmar, such as the United Nations Children’s Fund and the International Labour Organization on the human rights situation on the ground and how international cooperation could be geared, either through the Rapporteur or other mechanisms of the United Nations human rights system, towards the implementation of recommendations accepted by Myanmar within the Universal Periodic Review mechanism. Brazil would also like to seek the opinion of the Special Rapporteur on what the opportunities were for Myanmar to strengthen the process towardsamore democratic form of governance through equivalent improvements in the areas of the rule of law, access to justice and human rights. What were the views of the Special Rapporteur on how the release of people detained on political grounds could contribute to peace and national reconciliation?
RADKA PATALOVA (European Union) said that the European Union regretted that the Special Rapporteur on the human rights situation in Myanmar had not been allowed in the country since 2010 and strongly encouraged the Government to allow the Special Rapporteur to make the visit as soon as possible. The country’s human rights situation remained of serious concern, with more than 2,000 political prisoners. Instead of their release that the Government had been considering before the elections, their numbers had increased and their conditions of detention remained of serious concern. The European Union urged the Government to release immediately all prisoners of conscience and embark on the process of inclusive national reconciliation. The European Union took note of the country’s participation in the Universal Periodic Review and deeply regretted the rejection of many substantial recommendations. The European Union strongly regretted that the Government had not held free, fair, transparent and inclusive elections and strongly called upon the Government to recognise the National League for Democracy’s pre-election registration status and lift restrictions on its representatives and on other political and civil society actors. In conclusion, the European Union strongly supported the renewal of this mandate and the Special Rapporteur’s further work and his important contributions.
DICKY KOMAR (Indonesia) said that the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar indicated the need for Myanmar to address the deficit in economic, social and cultural rights, as indicated in the 2010 Human Development Report, as an utmost priority while stressing the important role of the international community to provide necessary assistance. In this context, Indonesia asked the Special Rapporteur what would be the most effective measures that would better increase Myanmar’s level of cooperation with the international community based on the principles of genuine dialogue and cooperation. Indonesia welcomed the holding of general elections as well as Myanmar’s decision to release Daw Aung San Suu Kyi. Indonesia considered that both events had to be considered as positive and significant milestones since the absence of any form of elections in over two decades. The international community should respond positively to the recent developments in Myanmar to ensure that further improvement could take place in the country.
JURG LAUBER (Switzerland) said Switzerland had followed the elections in Myanmar and it entirely shared the assessment of the Special Rapporteur that the elections were held in an environment of intimidation, coercion and corruption. More than 2,000 prisoners of conscience were held in detention under vague laws in dreadful conditions and those that were in ill health had not received the medical attention they required. Switzerland called on the Government of Myanmar to release these prisoners as soon as possible and to beginadialogue with the opposition, including the National League for Democracy to findapeaceful solution. Switzerland said that permitting the Special Rapporteur to visit the county would constituteasignificant signal by the Government.
PATRICK RUMLAR (Czech Republic) said that the report of the Special Rapporteur had not mentioned concrete changes brought about by the elections and the Czech Republic asked for further details on this issue. The elections had not brought about true progress towards democracy and human rights and had demonstrated how the Government of Myanmar deprived its citizens from the basic rights and fundamental freedoms. The Czech Republic requested the Special Rapporteur to be more specific on the question of how the realisation of economic, social and cultural rights could help to achieve an effective enforcement of full enjoyment of civil and political rights in Myanmar. The Czech Republic remained highly concerned about the situation of ethnic minorities in Myanmar who suffered from frequent violations of their human rights. What was the evaluation of the Special Rapporteur on the situation of the ethnic minorities, the Czech Republic asked. Also, it wished to know what role the international community could play in taking important steps towardsanational reconciliation andafull respect of human rights which were the crucial prerequisites for launchingaprocess of democratisation in Myanmar.
HELGA FASTRUP ERVIK (Norway) commended the Special Rapporteur for his comprehensive report. His words confirmed that last year’s general elections in Myanmar were hampered by lack of freedom of expression and association. However, Norway noted that there were some reasons of cautious optimism and asked the Special Rapporteur to look for areas of cooperation where achievements could be made. During the Universal Periodic Reviewanumber of recommendations (74) were accepted by the country and Norway urged the Special Rapporteur to look for cooperation for the implementation of these recommendations. They regretted that the visit to Myanmar by the Special Rapporteur had not been conducted and they agreed with the concern of the Special Rapporteur about the lack of social and economic development in Myanmar. It was important that Myanmar embarked onaprocess of reform and this would be regarded favourably by the international community.
MICHAEL MCBRYDE (New Zealand) said New Zealand welcomed the release of Aung Sun Suu Kyi asapositive step which should be followed up with the release of all political prisoners. During Myanmar’s Universal Periodic Review earlier this year, the international community expressed grave concern about human rights abuses in the country. New Zealand recommended that Myanmar should prioritise its work with the International Labour Organization onaJoint Action Plan to progress the implementation of Security Council Resolution 1612 and to ensure the effective implementation of the Convention on the Rights of the Child, especially the rights to education and health. New Zealand would be interested to know what work the Special Rapporteur planned on the rights of children and in particular on the ongoing issue of use of child soldiers in Myanmar.
BIENG THENG (Cambodia) said that the situation in Myanmar was complicated and challenging and the country was engaged in its continuing transition to democratisation. This wasabold challenge for Myanmar to overcome and therefore the Human Rights Council should take those efforts into account throughapractical approach of constructive dialogue and productive cooperation. The Council must take note of the recent political developments and the progress the Government of Myanmar had made in the implementation of the seven-step roadmap to democracy. Cambodia welcomed the efforts of the Government of Myanmar on the promotion and protection of human rights through the Universal Periodic Review process and its willingness to make further progress in cooperation with the Special Rapporteur on the human rights situation in Myanmar in order to address the concerns of the international community about the situation in the country.
SO SE PYONG (Democratic People’s Republic of Korea) said the Democratic People’s Republic of Korea commended the efforts of the Myanmar Government to improve the human rights situation and opposed selectivity and double standards. The Democratic People’s Republic of Korea rejected politicized country specific mandates as this led to divisions and distrust among States. It was high time that the international community rejected politicization in the Council. Otherwise, this would mean the repetition of the same mistakes of the former Commission. Politicized country specific mandates had to be eliminated forever.
MARKO HAM (Slovenia) said the human rights situation in Myanmar remained serious, however it subscribed to the opinion of the Special Rapporteur that the post electoral period represented an opportunity for positive developments in the field of human rights. Slovenia called on the Government to follow the example of the release of Daw Aung San Suu Kyi with an unconditional and immediate release of all prisoners of conscience. Could the Special Rapporteur please give the Councilashort assessment regarding further implications for other countries in the region if Myanmar failed to address the most urgent human rights challenges? Slovenia hoped that the Government of Myanmar would follow the recommendations from the country’s Universal Periodic Review, especially those that concerned the ratification of the two core covenants and other key human rights treaties.
YONG CHANTHALANGSY (Lao People’s Democratic Republic) said that the Lao People’s Democratic Republic noted with appreciation the significant efforts of the Myanmar Government to engage the country toward democracy and the improvement of livelihoods of its citizens. The Government of the Lao People’s Democratic Republic supported the principle of the Association of Southeast Asian Nations of non-interference into internal affairs of other countries and pursued and implemented consistently its foreign policy of peace, national independence and cooperation, based on the principles of mutual respect for independence, sovereignty and territorial integrity. The Government of Myanmar would take all necessary measures to improve the political and economic situation including the reinforcement of human rights in the country. The Lao People’s Democratic Republic urged the international community to work together with the Government of Myanmar to achieve all the goals of the roadmap.
TRAN CHI THANH (Viet Nam) noted with satisfaction the organization for the first time in over two decades of national elections on7November 2010, which served asabenchmark of the transition process in Myanmar, providing more opportunities for the protection and promotion of all human rights and fundamental freedoms. Viet Nam also appreciated the unconditional release by the Government of Myanmar of Aung San Suu Kyi. In their view, these evolutions were an important step forward to the national reconciliation and democracy. However, national reconciliation wasadifficult process that could not be shortcut. Hence, Viet Nam strongly encouraged Myanmar to continuously more forward in this rights way.
PETER WOOLCOTT (Australia) said Australia urged the Myanmar authorities to take practical steps recommended by the Special Rapporteur to ensure that its people had the right to education onanon-discriminatory basis that reflected cultural identity, language and values. Australia had made clear its view that the November 2010 elections had fallen well short of democratic norms and Australia would be watching very closely what would emerge from Myanmar’s political process. Australia continued to call on the Myanmar authorities to release more that 2,100 political prisoners still remaining. It was the responsibility of Myanmar to address justice and accountability and end impunity. Those should be high priorities for Myanmar’s new Government and parliaments. The Special Rapporteur noted that recommendations made by the international community on ways to improve the human rights situation in Myanmar remained largely outstanding and Australia reiterated its hope that Myanmar would look at all of the Special Rapporteur’s recommendations and take credible steps to address them.
MICHAEL ANTHONY, of Asian Legal Resource Centre, said the Asian Legal Resource Centre continued to document numerous cases of arbitrary detention, torture, forced disappearance and the demented use of courts to arbitrarily sentence persons without any rational, legal justification. While welcoming the release of Daw Aung San Suu Kyi in November 2010, the Asian Legal Resource Centre condemned the sham elections that preceded it and saw no credible signs of any progress concerning human rights in the country since then. The Asian Legal Resource Centre urged the Council to take the Government’s disconnection and deception into consideration when taking action. Propping up Governments that grossly abused the rights of their citizens had been shown to be flawed, immoral and unsustainable in the Middle East and North African and these lessons had to be applied in Myanmar, to bring to an end decades of fear and suffering.
POOJA PATEL, of Asian Forum for Human Rights and Development (Forum-Asia), inajoint statement with Worldview International Foundation and Conectas Direitos Humanos, said that contrary to the State Peace and Development Council’s rhetoric that only processes that were within the framework of the Constitution and in the Parliament would be recognized, they noted with irony that the Parliament itself faced suppression of the freedom of expression and was not even given oversight of the new national budget for the upcoming fiscal year. In this context, the Asian Forum would be interested to hear from the Special Rapporteur his comments on the national budget. Despite the numerous reports and well-documented evidence of gross violations of human rights in the country, the State Peace and Development Council had demonstratedacomplete lack of political will to undertake necessary measures to address them. The Asian Forum for Human Rights and Development urged the Human Rights Council to immediately act upon the repeated calls of the Special Rapporteur with concrete steps to bring aboutaUnited Nations-mandated Commission of Inquiry.
JULIE DE RIVERO, of Human Rights Watch, said the Special Rapporteur’s latest report overviewed the often neglected but important education sector in Myanmar and looked at the human rights dimensions of disastrous State policies that had degraded education in the country. To this date, tens of thousands of civilians had been displaced into Thailand asaresult of the post-election military offensive in Karen State. Human Rights Watch had documented human rights violations such as civilians forced to carry wounded combatants through areas containing anti-personnel landmines and the practice known as atrocity de-mining. The performance of the Government’s new Attorney General at the Universal Periodic Review had showed the obstinacy and callous defiance the Government had towards international scrutiny over its human rights record.
PETER SPLINTER, of Amnesty International, said the Government of Myanmar had failed in its commitment to take any comprehensive remedial action for its serious human rights failures. Amnesty International urged all Member States to support the renewal of the mandate of the Special Rapporteur and called on Myanmar to accept additional visits by the Special Rapporteur and to permit an International Commission of Inquiry to be established to investigate credible allegations of grave crimes in Myanmar. The Government should release all prisoners of conscience, halt all violations of international human rights and humanitarian law and provide adequate reparations to victims in accordance with international standards.
TOMAS OJEA QUINTANA, Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Myanmar, in concluding remarks, said that the Government of Myanmar had made extraordinary efforts throughout the country to carry out the national elections. Despite this, the elections had not been free, inclusive and had not respected fundamental rights. Many delegations said today there wasadegree of optimism inasense that those elections would open possibilities for the future. The new Myanmar authorities would be responsible in many ways for running the country and that was why they needed to take immediately the necessary political decisions to end all historical abuses that were carried out in the country and they hadaresponsibility to address these concerns. The Government had cooperated with the Special Rapporteur, who had an opportunity to visit the country on several occasions, and had engaged with the Universal Periodic Review and with some Special Procedures. The cooperation must be taken forward by the Government so that there wasaclear sense of improvement in the human rights situation in the country.
The first recommendation made concerned prisoners of conscience and many of them had received extreme sentences, often contrary to the Constitution of Myanmar itself. Those prisoners of conscience must be released immediately. Secondly, the reaffirmation of legal authorities was needed, to ensure independent and impartial procedures, which would tackle the issue of impunity. The next recommendation concerned legislative reform and the restitution of the laws of the old Government with new laws that would uphold rights. Reform of the armed forces was recommended as well and the new authorities must takeadecision to usher the reform so that in the regions where clashed occurred, civilian rights would not be compromised. The Government also needed to address the issue of forced labour and recruitment of children into armed forces. There was discrimination against some ethnic minorities, against the Constitution of the country. The people of Myanmar suffered from violations of their human rights and increasingly were not inaposition to exercise their economic, social and cultural rights properly; the new Government must do everything possible to improve those rights in the country. The Government needed to adoptagenuine human rights agenda that was forward looking, which would be an indicator that the country was ready to join the international community and ensureabetter future for its people.
by Aungmyo Tun on Tuesday, March 15, 2011 at 12:20am
ထိုစဉ်က ဇေယျာသီရိလမ်းထဲတွင် ကျွန်တော်တို့ဥ နေကြ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေး
တစ်ဆိုင်ရှိသည်။ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နားတွင် ပန်းအိကဖီးနှင့် လှည်းတန်းဈေး
မရောက်မီ စေတနာရှင်ကဖီးကို တွေ့ ရဦးမည်။
အဓိပတိလမ်းက ထွက်ပြီး ညာဘက်ချိုး၊ R.C2ဘက် သို့ ကျောင်းသားအုပ်ကြီး
လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲတွင် ဖုန်းမော်သေဆုံးတာနှင့်
ပက်သက်ပြီး ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပြီး ဒေါသတချောင်းချောင်းထွက်နေကြသည်။
ထိုစဉ်က ကမာရွတ်ရဲစခန်းမှာ လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နားတွင် ရှိသည်။ ဂျက်ဆင်ရှေ့ နှင့်
မာလာဆောင်နားတွင် “ မှုံရွှေရည်...သီချင်းလေးလိုကွယ်...” သီချင်းတွေ ဖီလင်အပြည့်
ထည့်ဆိုကြပြီး အာခေါင်ခြောက်မှ ပြန်ကြပြီး လှည်းတန်းမီးပွိုင့်နားက အလင်းဆိုင်တွင်
တံတားဖြူမှတ်တိုင်အလွန်တွင် သံဆူးကြိုးများနှင့် တားဆီးထားသည်ကို တွေ့ ရသည်။
နောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အင်းလျားလမ်းထိပ်အထိ ပြည်လမ်းမပေါ်တွင်
ကျောင်းသားထုကြီးကို လှိုက်မောအားရဖွယ်။ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ ဆက် မတိုးနိုင်ကြတော့ပါ။
ထိုစဉ်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများမှာ လွယ်အိတ်အရှည် လွယ်ကြပါသည်။ တချို့ 
စာအုပ်ကို လက်ထဲကိုင်၊ ဘောပင်ကို အကျီ င်္အိတ်ထဲ ထည့်ကြသည်။ ပရက်တီကယ်ချိန်ကို
အလေးထားကြသည်။ ကျွန်တော်တို့အရှည်ကြီးဆိုင် ထိုင်တာများပါသည်။ မန္တလေးဆောင်နှင့်
နီးသဖြင့် ပိုအဆင်ပြေသည်။ တောင်ငူဆောင်နားမှာ ဦးချစ်ဆိုင် ရှိပါသည်။
သိပ်မကြာခင် ကျောင်းသားတွေ အော်သံကြားရသည်။ မာလာဆောင်ဘက်က လုံထိန်းကား
တွေ ၀င်လာပြီ။ ကျောင်းသားတွေကို ညှပ်ပိတ်ပြီး အသေအကြေဖြိုခွင်းတော့မည့် သဘော
ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ မှာ နံပတ်တုတ်နှင့် သေနတ်တွေကို ပြန်လည်ခုခံစရာ ဘာဆိုဘာမှ မရှိပါ။
မကျေနပ်ခြင်းများရှိသည်။ ဖုန်းမော်ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ဖော်ထုတ်ပေးစေချင်သည်။ လူသတ်တရားခံကို
အရေးယူပေးရမည်။ ထိုစိတ်များကို အရင်းတည်ပြီး အစိုးရကို အာခံကြခြင်းဖြစ်သည်။
ထိုစဉ်က ကျောင်းသားများသည် အပြင်စာများကို တခုတ်တရ ဖတ်ကြသည်။ ကဗျာတွေ ရေး
ပြီး အပြန်အလှန် ပေးဖတ်ကြသည်။ မဂ္ဂဇင်းများထံ စာမူတွေ ပို့ ကြသည်။ ကျောင်းသားများသည်
ရိုးသားကြသည်။ တည်ငြိမ်ကြသည်။ အေးဆေးကြသည်။ ရင့်ကျက်ကြသည်။ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်
သည် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဟန်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မာန် အပြည့်နှင့်။
တချို့ အင်းလျားကန်ပေါ် တက်ပြေးသည်။ တချို့ ပြည်လမ်းဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ အိမ်များဘက်
ပြေးကြသည်။ ကျွန်တော် အင်းလျားကန်ပေါင်ပေါ် တက်ပြေးသည်။ လုံထိန်းကားများ တရဟော
မောင်းချလာသည်ကို မြင်ရသည်။ အင်းလျားကန်ပေါင်သည် ပြေးပေါက်ပိတ်နိုင်သော သတ်ကွင်း
သဖွယ်ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟု တွေးမိပြီး ခြေကုန်သုတ်ပြီး ဟိုဘက်ခြမ်းက အိမ်တွေဆီ အသက်ရှူ
မှားမတတ် ထွက်ပြေးမိသည်။ ခြံအုတ်တံတိုင်းများပေါ် ကျော်တက်ကြရာ ကျောင်းသူများကို
ဦးစားပေးပြီး ဆွဲတင်တွန်းတင်ကြသည်။ တချို့ အိမ်များ မသိမသာတံခါး ဟ ပေးထားသည်။
ထိုစဉ်က ခင်မောင်တိုး၊ စိုင်းထီးဆိုင်နှင့် ခင်ဝမ်းသီချင်းတို့ သည် ကျောင်းသားများကြား
ရေပန်းစားလှသည်။ ထမီတိုတို၊ ခြေသလုံသားပေါ်အောင် ၀တ်ကြသော ကျောင်းသူများကို
သြဘာပေးကြသည်။ ကိုယ်ပိုင်ကားမောင်းပြီး ကျောင်းတက်ကြသော ကျောင်းသူတချို့ ကို
ခိုးကြည့်ကြသည်။ သိပ္မံလက်တွေ့ ခန်း ၀င်ရန် အဓိပတိလမ်းကို တမျှော်ကြီး လျှောက်ရသည်။
နောက်ဘက်တွင် ကျန်ခဲ့သော ကျောင်းသားများကို လုံထိန်းများက ရိုက်နှက်ကြသည်။
ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ကျောက်ကြသည်။ ကျောင်းသူများ အော်ဟစ်သံများကို ကြားရသည်။
ထိုတံတားသည် နီပြီ။ ကျန်ရစ်ခဲ့သော ကျောင်းသားများနှင့် အဖမ်းခံရသော ကျောင်းသားများကို
ကျွန်တော်တို့မမေ့ပြီ။ ဇော်ဇော် ပါသွားပြီ။
ရန်ကုန်တစ်မြို့ လုံး “ တောက် ” ခေါက်လိုက်ကြသည်။
၁၄- ၃- ၂၀၁၁
15 March 2011 Yeyintnge's Diary.doc
4096K View Download
15 March 2011 Yeyintnge's Diary.pdf
3380K View Download
15 March 2011 Yeyintnge's Diary
Burma's Next Uprising can be anytime, said U Win Tin
ဦးမျိုး | အင်္ဂါနေ့၊ မတ်လ ၁၅ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၉ မိနစ်
ပုံ - သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး၊ ဥက္ကဋ္ဌ နအဖက ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၈ ရက်စွဲဖြင့် “ ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ (နအဖ ဥပဒေအမှတ်- ၂ဝ/၂ဝ၁ဝ) ကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဤဥပဒေပုဒ်မ ၇၄ ဖြင့် “၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်။ တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ (၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်၊ နအဖ ဥပဒေအမှတ် ၅)ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်သည်” ဟုဖော်ပြသည်။ ၂ဝဝဝ နှင့် ၂ဝ၁ဝ တရားစီရင်ရေး ဥပဒေများတွင်ပါရှိသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမူများ ကွာဟချက်ဟု မတွေ့ရပါ။ သို့သော် စာတူသော်လည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုများ ပိုမိုဆိုရွားလာသည့် ပုဒ်မများနှင့် အမှုပေါင်းမြောက်များစွာ ရှိနေသည်ကိုတော့ ငြင်းမရပါ။ နိုင်ငံတော်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းဥပဒေများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီခြင်းမရှိဘဲ တရားစီရင် ဆုံးဖြတ်ထားသည်များကို ဖော်ထုတ်ကြရပါမည်။
စာတူသော်လည်း လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုများ ပိုမိုဆိုရွားလာသည့် ပုဒ်မများနှင့် အမှုပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိနေသည်ကိုတော့ ငြင်းမရပါ။ နိုင်ငံတော်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်း ဥပဒေများနှင့် လုံးဝကိုက်ညီခြင်းမရှိဘဲ တရားစီရင် ဆုံးဖြတ်ထားသည်များကို ဖော်ထုတ်ကြရပါမည်။
ပြည်ထောင်စု တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ (နအဖ ဥပဒေအမှတ် -၂ဝ/၂ဝ၁ဝ) အခန်း(၂) တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာမူများ ပုဒ်မ -၃။ ။တရားစီရင်ရာတွင် အောက်ပါတို့ကို အခြေခံ၍ စီရင်ရမည်-
(က) ဥပဒေနှင့်အညီ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေး၊
(ခ) ဥပဒေအရ ကန့်သတ်ချက်များမှ အပ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ရေး၊
(ဂ) အမှုများတွင် ဥပဒေအရ ခုခံချေပခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့် ရရှိရေး၊
(ဃ) ပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်၍ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ နယ်မြေ အေးချမ်းသာယာရေး တည်ဆောက်ရာတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရေး၊
(င) ဥပဒေကို ပြည်သူများက နားလည်လိုက်နာ ကျင့်သုံးလာစေရန် ပညာပေးရေးနှင့် ပြည်သူများက ဥပဒေကို လိုက်နာသော အလေ့အကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရေး၊
(စ) ပြည်သူအချင်းချင်းနှင့် ပတ်သက်သော အမှုကိစ္စများကို ဥပဒေဘောင် အတွင်း၌ ကျေအေး ပြီးပြတ်စေရေး၊
(ဆ) ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူကို အရေးယူအပြစ်ပေးရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တ ပြုပြင်မှုကို ဦးတည်ရေး၊ ဟုဖော်ပြထားပါသည်။
နိုင်ငံတော်အတွင်း အထက်ပါမူများနှင့် ကိုက်ညီခြင်းမရှိဘဲ အရေးယူဆောင်ရွက်သော အမှုပေါင်း မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ခြင်းမရှိသော ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ အမှုတွဲများကို တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုကို ဖျက်ဆီးပစ်သည့် နအဖ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးအမိန့်ဖြင့် ဒီပဲယင်း လူသတ်မှုမျိုးလို အမှုများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
ဥပဒေ ပညာပေးရေးကို ဘာတခုမျှ မလုပ်ခဲ့ဘဲ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေကို အတင်းအဓမ္မ မဲထည့်ခိုင်းခြင်းက ပေါ်လွင်လွန်းပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ ကို အရေးယူအပြစ်ပေးရာတွင် အကျင့်စာရိတ္တပြုပြင်မှုကို မဦးတည်ဘဲ အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားသွားအောင် မတရား အလုပ်ခိုင်းစေခြင်းမျိုး၊ ထောင်တွင်းညှဉ်းပန်း သတ်ဖြတ်မှုမျိုး လုပ်ဆောင်နေသည်ကို ထောင်တွင်းကျဆုံးသွားသော နိုင်ငံရေးသမား ၁ဝဝ ကျော်ရှိနေခြင်းက သက်သေပြနေပါသည်။
တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၏ အပေါ်တွင် ရှိမနေပါ။ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ အမြင့်ဆုံး တရားစီရင်ရေး အာဏာ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။
ဤ ၂ဝ၁ဝ တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ -၅ တွင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ မည်သူ့ကို မဆို ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် အချိန်က အတည်ဖြစ်လျက်ရှိသော သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေအရသာ ပြစ်မှု ထင်ရှားစီရင်ရမည်။ ထို့ပြင် ယင်းဥပဒေအရ ချမှတ်နိုင်သော ပြစ်ဒဏ်ထက်ပို၍ ချမှတ် ခြင်း မပြုရဟု သတ်မှတ်ချက်များကို ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်ထားသည့် တရားရုံးအမှုတွဲ မြောက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ အမှုတွဲအားလုံးကို ကဏ္ဍခွဲ၍ လေ့လာသုံးသပ်လျှင် တရားစီရင်ရေး စနစ်တခုလုံး မှောက်မှောက်မှားမှား စီရင်ထားကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ မြန်မာ့ တရားစီရင်ရေး တွင် တခါဘူးမျှ မကြားခဲ့ မနာခဲ့ရသော ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်တို့ကို နှစ်ရှည် နှစ် ၁ဝဝ ကျော်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်မှုများ၊ ပြစ်မှု တမှုတည်းကို အကြိမ်ကြိမ် ၅-ခါ ချမှတ်ခံရသော ဒေါ်ဝင်းမြမြ အမှုတွဲများကို တွေ့ရှိရပါသည်။
ပြည်သူများက ဥပဒေကို လိုက်နာသော အလေ့အကျင့် ပျိုးထောင်ပေးရေး ရှိရမည့် အစား သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သော အာဏာပိုင် အဆင့်ဆင့် အားလုံးက ဥပဒေကို ချိုးဖောက်နေကြသည်ကိုသာ တွေ့မြင်နေရပါသည်။ ခေါင်က မိုးယိုလျှင် တအိမ်လုံး ဆွေးမြေ့ပျက်စီးတတ်ပါသည်။
ဤ ၂ဝ၁ဝ တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ- ၇၂ တွင် ဤဥပဒေကို ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် အညီ ဖွဲ့စည်းသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုပါရှိသဖြင့် ပုံ သန်းရွှေ က ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်း မပြုလုပ်နိုင်သကဲ့သို့ ဤဥပဒေ ကိုလည်း ၎င်းတဦးတည်းက ပြဋ္ဌာန်း၍ မရနိုင်ကြောင်း သိထားအပ်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စု ဥပဒေပြု လွှတ်တော်ကသာ ပြဋ္ဌာန်းရပါမည်။
၂ဝ၁ဝ တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ -၈ တွင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများနှင့် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး၏ စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာများကို မထိခိုက်စေဘဲ နိုင်ငံတော်၏ အမြင့်ဆုံး တရားရုံးဖြစ်သည်ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့် တရားလွှတ်တော်ချုပ်မှာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးများ၏ အပေါ်တွင် ရှိမနေပါ။ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ အမြင့်ဆုံး တရားစီရင်ရေး အာဏာ ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ ပုဒ်မ ၃ဝ (ဃ) (၄) တွင် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများသည် ထင်ပေါ် ကျော်ကြားသည့် ဂုဏ်သတင်းရှိသော ဥပဒေပညာရှင်အဖြစ် နိုင်ငံတော် သမ္မတက ယူဆသူ၊ ဟုပါရှိပါသည်။ ပုဒ်မ ၄၈ (ဃ) (၃) တွင်လည်း နိုင်ငံတော် သမ္မတက ယူဆသူ ဟုဖော်ပြ ထားပါသည်။ နိုင်ငံတော် တခုလုံးဆိုင်ရာများတွင် ပုဂ္ဂလိက လုံးဝမဆန်သင့်ပါ။ ပြည်ထောင်စု တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများကို အလေးထားသင့်ပါသည်။
ဥပဒေစနစ်ပျက်ပါက ဥပဒေအရ တရား စီရင်ရသည့် တရားစီရင်ရေး စနစ် တခုလုံးလည်း ပျက်စီးယိုယွင်း သွားပါတော့ မည်။ ခွေးတကောင်လုံး ရေထဲ နစ်နေမှတော့ ခွေးပေါ်က ခွေးသန်းတွေက ဘာကောင်မို့လို့ လဲ။
အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင် ကြိုးဆွဲရာ ကပြရမည့် ရုပ်သေးတရားသူကြီးများအဖြစ် ကြိုးမချုပ်သင့်ပါ။ တရားစီရင်ရေး လွတ်လပ်မှု တစုံလုံး ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။ တရားလွှတ်တော်ချုပ် အထက်တွင် အုပ်ချုပ်ရေး သမ္မတ ရှိနေပါသည်။ အုပ်ချုပ်သူ အစိုးရများ၏ မတရား အကျင့်ပျက်ခြစား လာဘ်စားပြီး တိုင်းပြည် ရောင်းစားနေမှုများကို မည်သည့်တရားသူကြီးက စီရင်ဝံ့ပါမည်နည်း။
မည်သည့်နိုင်ငံ၏ ဥပဒေစနစ်တွင်မဆို မည်သည့်ဥပဒေကမျှ နောက်ကြောင်းပြန် အာဏာသက်ရောက်ခြင်း မရှိစေရပါ။ သို့သော် ၂ဝ၁ဝ တရားစီရင်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ -၆၁ တွင် ဤဥပဒေ အာဏာမတည်မီ နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီက ဤဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းရပ်များ သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ဟုဖော်ပြထားချက် ကို တွေ့ရပါသည်။ အာဏာမတည်မီကကိစ္စအားလုံး နောက်ကြောင်း ပြန်ထားမှုများ ဖြစ်နေပါသဖြင့် ပြဋ္ဌာန်းလာသမျှ ဥပဒေများမှာ ဥပဒေများ (မည်သည့်ဥပဒေမျှ မဆို ဟုဆိုထားသဖြင့်) မဟုတ်ကြတော့ပါ။ အားလုံးပျက်ပြယ်သွားပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အာဏာတည်ပြီးမှ ပြဋ္ဌာန်းရမည့် ဥပဒေများသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်းပြန်မှားယွင်း ချွတ်ချော်နေသည့် ဥပဒေစနစ်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဥပဒေစနစ်ပျက်ပါက ဥပဒေအရ တရား စီရင်ရသည့် တရားစီရင်ရေး စနစ်တခုလုံးလည်း ပျက်စီးယိုယွင်း သွားပါတော့မည်။ ခွေးတကောင်လုံး ရေထဲ နစ်နေမှတော့ ခွေးပေါ်က ခွေးသန်းတွေက ဘာကောင်မို့လို့လဲ။ စနစ်တခုလုံး ရေထဲ နစ်နေသည်ကို ကူပါကယ်ပါ အော်ရပါတော့မည်။မီးလောင်လျှင် မီးကင်းခေါက်ရန် လူတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။
၂ဝ၁ဝ တရားစီရင်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ -၆၆ တွင် “ပြည်ထောင်စု တရားသူ ကြီးချုပ်သည် ပြည်ထောင်စု လွတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်ဖြစ်စေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် သို့မဟုတ် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင်ဖြစ်စေ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် အများ ပြည်သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် အရေးကြီးသော တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အခြေအနေကို အခါအားလျော်စွာ တင်ပြနိုင်သည်။ ” ဟုဖော်ပြထားပါသည်။ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် အနေဖြင့် အထက်ဖော်ပြပါ လက်ရှိအခြေအနေများကို ယခုလွှတ်တော်များ ကျင်းပနေချိန်တွင် တင်ပြဝံ့ပါ၏လော။ မလိမ်မညာစတမ်း အမှန်တရားကို ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ရဲရပါမည်။
၁၅ - ၃ - ၂ဝ၁၁
ကိုယ်ဖျောက်ဝိဇ္ဇာ၏ ကိုယ်ဖျောက်ဝိဇ္ဇာ (အာဇာနည်နေ့ဇာတ်လမ်းတပုဒ်)
(ကျွန်ုပ်ကိုယ်ဖျောက်ဝိဇ္ဇာသည် ဆောင်းပါးရေးသူဖြစ်ပါသည်။ ယခုလည်းဆောင်းပါးတပုဒ် ရေးထုတ်လိုက်ပါသည်။ ဆောင်းပါးလား၊ ဘာလား၊ ညာလားကတော့ စာဖတ်သူအလိုကျ မှတ်ယူပါလေ။ ယခုစာတွင်ဖော်ပြထားသော အမည် “ကိုသူငယ်” မှာ အမည်ရင်းမဟုတ်ပါ။)
၁၉၇၀ ခုနှစ် မတိုင်မီကဖြစ်ရပ်။
ကိုသူငယ်တို့တလမ်းတည်းနေ လူငယ်များက လမ်းထဲမှာ အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဦးစွာပထမ ရဟန်းသံဃာများကို အာရုဏ်ဆွမ်းကပ်တယ်။ သံဃာတော်များထံမှ တရားနာယူတယ်။ ပြုခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုကို ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ အာဇာနည်ကြီးများကို အမျှအတန်းဝေတယ်။ လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် ကျဆုံးသွားသူများကိုလည်း အမျှအတန်းဝေတယ်။
သံဃာတော်များ ပြန်ကြွသွားတော့ စားဖွယ်သောက်ဖွယ် အမယ်မယ်ကို ပြင်ကြတယ်ခင်ဗျ။ ကျုပ်တို့လူမျိုးရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာဓလေ့လို့ ပြောရလိမ့်မယ်ထင်ပါ့။ ဟိုလူကိုဖိတ်။ ဒီလူကိုခေါ်။ ကြွပါခင်ဗျ။ ထိုင်ပါခင်ဗျ။ အဲဒီလိုနဲ့ ဧည့်ခံကျွေးမွေးဖို့ရာ ရှုပ်ယှက်ခတ်နေကြတယ်။
အဲဒီလို ရှုတ်ယှက်ခတ်နေချိန်မှာ လမ်းထဲက ဦးလှမင်းအိမ်ကို ကိုသူငယ် ခပ်သုတ်သုတ်ထွက်လာခဲ့တယ်။ ဟိုးအရင်က ဗေဘီဗိုက်တာ ကလေးဆေးကို တီဗီမှာ ပလူပျံအောင် ကြော်ငြာခဲ့တာ ဦးလှမင်းပါ။ ဦးလှမင်းဟာ လမ်းသူလမ်းသားတွေနဲ့ အခေါ်အပြောမရှိ၊ ခပ်စိမ်းစိမ်းဖြစ်ပြီး ဘက်ပဲ့နေတဲ့လူပါခင်ဗျာ။ ဒီလိုလူကို ကိုသူငယ်က လမ်းသူလမ်းသားတွေနဲ့ ရောနှောနွေးထွေးလာအောင် ဆက်ဆံရေး ဂဟေဆက်ပေးချင်တယ်။ ဒါကြောင့် ဦးလှမင်းကိုအပါခေါ်ဖို့ ထွက်လာခဲ့တာ။ ဦးလှမင်းကို အသင့်မတွေ့တော့ တွေ့တဲ့လူကိုပဲပြောရတော့တယ်ဗျာ။
“ဦးလှမင်းကို လာဖိတ်တာ။ အာဇာနည်နေ့ အလှူလုပ်တယ်ဗျာ။ ဧည့်သည်တွေကို ကျွေးဖို့ပြင်နေပြီ။ ဦးလှမင်းရော”
ကိုသူငယ်က သွက်လက်ပါပေ့။ တဖက်လူက ဘာမျှမတုန့်ပြန်။ မထုံတက်တေး၊ အေးတိအေးစက်နိုင်လွန်းလှတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုသူငယ်က နောက်ထပ်တကျော့, ကျော့လိုက်ရပြန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
“ဦးလှမင်းရော အာဇာနည်နေ့အလှူကို တပါတည်းခေါ်သွားမလို့”
တဖက်လူက ငေါင်တောင်တောင် ကြောင်အမ်းအမ်း..။ ကိုသူငယ် အီလည်လည်ဖြစ်လာရတယ်။ တော်ပါသေးရဲ့။
ဦးလှမင်း အိမ်ထဲကထွက်လာလို့။ ဦးလှမင်းက ငြင်ငြင်သာသာ စကားဆိုလာပါတယ်။
“ကိုသူငယ် ထိုင်လေ။ လာလာ ဒီမှာထိုင်”။ ဦးလှမင်းက ပြောပြောဆိုဆို ဆက်တီဧည့်ထိုင်ခုံမှာ ထိုင်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှပဲ ကိုသူငယ်လည်း ဦးလှမင်းနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ၀င်ထိုင်လိုက်တယ်။ ဦးလှမင်းရဲ့မျက်နှာက မကြည်မလင်ခင်ဗျ။ မလန်းမဆန်း ညှိုးညှိုးနွမ်းနွမ်းခင်ဗျ။ ဦးလှမင်းက အသံသဲ့သဲ့လေးနဲ့ စကား “စ” တယ်။
“အာဇာနည်နေ့ အလှူလုပ်လို့ လာဖိတ်တာ၊ ဟုတ်လား..ကိုသူငယ် … အင်း …”
ဦးလှမင်းက စကားကို ဆိုင်းငံ့လုပ်ထားတယ်။ စကားမဆက်သေးဘဲ အိမ်ရှေ့လမ်းမဘက်ကို ငေးကြည့်နေလေရဲ့။
တခုခုတော့ တခုခုပဲလို့ ကိုသူငယ် သတိပြုမိတယ်။
“ကိုသူငယ်..။ ကျနော်ဦးလှမင်းကို မသိဘူးလား”
ဒီမေးခွန်းက ကိုသူငယ်ကို ပဟေဠိဖြစ်စေတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုသူငယ်ရဲ့နှုတ်မှ တအံ့တသြော စကားတစ်ခွန်း`လွှတ်´ ခနဲထွက်သွားပါလေရော။
ခဏလေးအတွင်းမှာပဲ ကိုသူငယ်`ဖြတ်´ခနဲ သတိပြန်ဝင်လာတယ်။ သည်တော့မှပဲ ဖြစရာကို ဖြေမိတော့တယ်ဗျာ။
“သိတယ်လေ။ ဦးလှမင်းကို ကျနော်ကဘာဖြစ်လို့ မသိရမှာလဲ။”
အဲဒီလို ကိုသူငယ်က ဖြေသာဖြေလိုက်ရတယ်။ စိတ်ထဲကပဟေဠိကတော့ ပဟေဠိဟာ, ပဟေဠိပါပဲဗျာ။
“သြော်..ကိုသူငယ်က ကျနော့်ကိုဦးလှမင်းရယ်လို့ပဲ သိနေတာကိုး။ ဒီလိုပွဲမျိုးကို ကျနော်မသွားရဲပါဘူးဗျာ။”
ဦးလှမင်းရဲ့စကားသံက ပြောရင်းနဲ့ တိမ်တိမ်သွားတယ်။ မျက်နှာကလည်း အောက်ဘက်ကို ငိုက်ကျသွားတယ်ခင်ဗျ။ ထိုင်ခုံရဲ့ ယာဘက်လက်တန်းပေါ်မှာ ယာတံထောင်ဆစ်ကိုထောက်လို့..။ ငိုက်ကျနေတဲ့နဖူးကို ယာဘက်လက်ဖမိုးနဲု့ ပင့်မ ထားလေရဲ့။ ဦးလှမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲ။ ကိုသူငယ် တွေးရခက်လှတယ်။ အင်း.. ကိုသူငယ့် ပဟေဠိကတော့ တခါပဟေဠိပြီးတာနဲ့ နောက်ထပ်ပဟေဠိတွေက ပွားပွားလာတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဦးလှမင်းရဲ့ခေါ်သံယဲ့ယဲ့ကို ကြားရပြန်တယ်။
အဲဒီခေါ်သံနောက်မှာ ဦးလှမင်းရဲ့တိုးတိုးညှင်းညှင်း ငိုရှိုက်သံက တွဲလျက်သားပါလာတယ်ဗျာ။ ဦးလှမင်းက ချုပ်တီးမရတော့လို့ လက်လျှော့လိုက်တယ်ထင်ပါ့။ ငိုရှိုက်သံရဲ့နောက်မှာ ဟီးခနဲငိုချသံကြီးက ပွင့်အံထွက်ကျလာပြန်တယ်။
အဲဒီငိုချသံကြီးနဲ့ပဲ ဦးလှမင်းက စကားကို ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့ ဆက်ပြောတယ်ဗျ။
“ကိုသူငယ်လာဖိတ်တာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဗျာ..”
ဦးလှမင်းက စကားကို ဆက်မပြောနိုင်..။ ခေါင်းကတော့ ငိုက်စိုက်မြဲငိုက်စိုက်လျက်..။ ရှိုက်လို့ရှိုက်လို့နေပါတယ်။
အတော်အားယူပြီးမှ စကားကို ဆက်နိုင်တယ်။
“ကျနော့်လိပ်ပြာက ကျနော့်ကို ခြောက်တယ်၊ လှန့်တယ်၊ သရော်တယ်။ လူတောထဲတိုးရဲတဲ့အားအင် ကျနော့်မှာမရှိတော့ပါဘူးဗျာ။”
ဦးလှမင်း ဘာတွေကိုပြောနေတာလဲ။ ပြောရင်းငို၊ ငိုရင်းပြော..။ ကိုသူငယ်တယောက် အူလည်လည် ဖြစ်လာတယ်။ ထသွားရလည်းအခက်။ ဆက်ထိုင်နေရလည်းအခက်။ ကိုသူငယ် အခက်ကြုံနေတုန်းမှာပဲ ဦးလှမင်းထံမှစကားက ထွက်လာပြန်တယ်။
“ကျနော်ဦးလှမင်းဟာ ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်ပါတယ်လို့ ကိုသူငယ် သိလိုက်ရပြီဆိုပါစို့်။ ကိုသူငယ်ကျနော့်ကို သတ်ပစ်ချင်လိမ့်မယ်။ သတ်ပါဗျာ။ သတ်သာသတ်လိုက်ပါတော့ဗျာ”
ဦးလှမင်းရဲ့ငိုရှိုက်သံက လှိုက်ခနဲ, လှိုက်ခနဲ ထွက်လာတယ်။ ကိုသူငယ့်ရင်ထဲ သိမ့်ခနဲခံစားလိုက်မိရဲ့။ တဆက်တည်း ပါပဲ၊ ဦးလှမင်းဟာ ဘယ်သူလဲ။ သူ့ကို ဘာကြောင့်သတ်ပစ်ချင်ရမှာလဲ။ သူကဘာကြောင့် ငိုကြီးချက်မ ယူကြုံးမရခံစားနေရသလဲ။ `လဲ´ပေါင်းများစွာနဲ့ ကိုသူငယ် ခြာခြာလည်ပြီ။ အဲဒီလို ခြာခြာလည်နေတုန်းမှာပဲ၊ လုံးဝမျှော်လင့်မထားတဲ့ မချိတင်ကဲစကားလုံးက ဦးလှမင်းရဲ့နှုတ်မှ အားမာန်ပါပါ လွင့်ထွက်လာတယ်။
“ဦးလှမင်းဆိုတဲ့ကျနော်ဟာ ဖော်ကောင်ဘညွန့်ဗျ..။ ဖော်ကောင်ဘညွန့်..။ ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို လုပ်ကြံခဲ့တဲ့ ဂဠုန်စောရဲ့တပည့် ဖော်ကောင်ဘညွန့်”
ကိုသူငယ် အံ့အားသင့်သွားတယ်။ `ဖော်ကောင်ဘညွန့်´ ဆိုပါကလား။ နှလုံးသားထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ အမြစ်တွယ်လာခဲ့တဲ့ နာကျည်းစိတ်ကြောင့် ရင်ထဲမှာမခံမရပ်နိုင် ခံစားလိုက်ရတယ်။ အသည်းကို အပ်နဲ့အဆွခံရလို့ နာတယ်ဆိုတာမျိုးဟာ ဒီလိုနာတာမျိုးဖြစ်လေမလား။ အဲဒီလို ကိုသူငယ်တွေးမိတယ်။ နုတ်နုတ်စဉ်းပြီး သတ်ချင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ကို ပက်ပင်းတိုးမိပြီ။ အဲဒီလူကလည်း သတ်သာသတ်လိုက်ပါလို့ ပြောနေပြန်ပြီ။ ကိုသူငယ်ဘာလုပ်ရမလဲ။ သက်ပြင်းတချက်`မှုတ်´ထုတ်လိုက်တယ်။
ဦးလှမင်းက တဟီးဟီးနဲ့ ငိုနေပြန်တယ်။ တချက်တချက်မှာ ရှိုက်သံက ၀မ်းခေါင်းထဲက အလိပ်လိုက် ထွက်လာတယ်။ ခေါင်းကို ပြန်မဖော်နိုင်။ ငိုရင်းနဲ့ပြောပြန်တယ်။
“ကိုသူငယ်..။ ကျနော့်ကို ရွံသွားပြီလား။ မုန်တီးနာကျည်းသွားပြီလား။ ကျနော်က ဖော်ကောင်ဘညွန့်လေ။ လူတောထဲ ဘယ်လိုဝင်ရဲတော့မလဲဗျာ”
ခုမှပဲဦးလှမင်းရဲ့ ဘက်ပဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကို ကိုသူငယ် သဘောပေါက်တော့တယ်။
“အာဇာနည်နေ့မှာ ကိုသူငယ်တို့က ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေ ပြုကြတယ်၊ ဗိုလ်ချုပ်တို့ကို အမျှဝေကြတယ်၊ ကျေးဇူးတွေ ဆပ်ကြတယ်။ ကျနော်ကတော့ ဒီအချိန်ရောက်လာတိုင်း လူမသိအောင် အိမ်ထဲမှာ ကြိတ်ကြိတ်ငိုနေခဲ့ရပါတယ်ဗျာ”
ဦးလှမင်းက ဖြိုင်ဖြိုင်စီးကျနေတဲ့ မျက်ရည်များကိုသုတ်..။ နှာရည်များကိုညှစ်ထုတ်..။ ကိုသူငယ်ကတော့ ဘာဆက်ပြောရမယ်မသိ။ ငိုင်သွားပြီ။
“ကိုသူငယ်.. ကျနော်ဖော်ကောင်ဘညွန့်ဟာ ဦးစောက နန်းရင်းဝန်လုပ်ခဲ့ဘူးတော့၊ အထင်ကြီးခဲ့တယ်။ သူလိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမျိုးနဲ့ တွဲရတာဂုဏ်ရှိတယ်လို့ ထင်မိခဲ့တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်မိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ။ ဦးစောနဲ့တွဲရင် ကိုယ်ကလည်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီးဆိုတော့ နောင်တ်နေ့မှာ ၀န်ကြီး, ၀န်ကလေးဖြစ်လာမယ်။ အာဏာရှိမယ်။ ဂုဏ်ရှိမယ်။ ဥစ္စာလည်းကြွယ်ဝလာမယ်။ အဲဒီလိုသူပြောခဲ့သမျှကို ဟုတ်နိုးနိုးထင်ပြီး လောဘတက်မိခဲ့တယ်ဗျာ။”
ဦးလှမင်း.. အဲ.. ဖော်ကောင်ဘညွန့်..။ သူက ငုံ့ထားတဲ့ခေါင်းကို ပြန်မော့လိုက်တယ်။ မျက်ရည်တွေကို လက်ဖ၀ါးနဲ့ပဲ သုတ်ပစ်တယ်။ မျက်လုံးတွေကရဲလျက်..။ မျက်နှာကြီးကလည်းနီလို့..။ ဖွင့်ဟ၀န်ခံပြီးပြီမို့ စိတ်ထဲပေါ့သွားလေသလား။ ကိုသူငယ်ကို မျက်နှာငယ်ငယ်နဲ့ မော့ကြည့်ပြီး စကားဆိုလာပြန်တယ်။
“ဦးစောဟာ အကြံပက်စက်တယ်၊ ရက်စက်တယ်၊ ကြမ်းကြုတ်တယ်။ ဒါကိုနောက်ပိုင်းမှာ တဖြည်းဖြည်း သတိတော့ ပြုမိပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် အသိဉာဏ်ဓာတ်ခံက အားနည်းတော့ ဦးစောရဲ့ငါးမျှားချိတ်က ငါးစာကိုပဲ အာသာငမ်းငမ်း မက်မောနေခဲ့တာဗျ။ ငါးမျှားချိတ်ကို မမြင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဦးစောကို ခွာရကောင်းမှန်းနည်းနည်းလေးမှ သတိမပြုမိခဲ့ဘူး။ ကျနော့်အဖို့ သူ့အရှိန်အ၀ါက ကြီးလွန်းပါတယ်ဗျာ။ ဒီတော့သူ့ရဲ့ ခိုင်းစေညွှန်ကြားမှုအောက်မှာ ကျနော် အလိုတူအလိုပါ ကျူးလွန်မိခဲ့တော့တာပေါ့ဗျာ”
ကိုသူငယ်လာတာက ဦးလှမင်းဆီ။ အခုတော့ ဦးလှမင်းက ဖော်ကောင်ဘညွန့်ဖြစ်။ ဖော်ကောင်ဘညွန့်နားမှာ ကိုသူငယ်မထိုင်ချင်တော့။ ထပြန်ချင်ပြီ။ တော်ပါသေးရဲ့..။ ပျောက်နေတဲ့ ကိုသူငယ်ကို လိုက်ရှာတဲ့သူငယ်ချင်း ရောက်လာလို့..။
ဒီတော့မှပဲ ကိုသူငယ်ထွက်ပေါက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့်ဖော်ကောင်ဘညွန့်နဲ့ ရှေ့ဆက် ဘယ်လိုစခန်းသွားမလဲ။ ဒါက ကိုသူငယ်အတွက် နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ ပဟေဠိသစ်ပါခင်ဗျား။
ဂဠုန်စောကိုဖေါ်တာက ဖေယ်ကောင်ဘညွန့်..။ ဖေယ်ကောင်ဘညွန့်ကို ဖော်တာက ဖေယ်ကောင်လှမင်း..။
ဂဠုန်စောက သူ့အတွက် နာမည်ကြီးဝတ်လုံတော်ရမင်း မစ္စတာ ဗတားနစ်ကို ကြေးကြီးကြီးပေးပြီး ငှားတယ်။ အားမရသေးလို့ ဘိလပ် (ခေါ်) အင်္ဂလန်က နာမည်ကြီးဝတ်လုံတော်ရမင်း မစ္စတာကားတစ်ဘင်းနက် (ကေစီ) ကိုလည်းငွေပုံအောပြီး ငှားလိုက်သေးတယ်။
သို့သော်လည်း အသက်ကိုရင်းပြီး အမှုတော်ထမ်းခဲ့ကြတဲ့ တပည်များအတွက် ငှားပေးတာကတော့ သာယာဝတီနဲ့ အုတ်ဖိုက တောရှေ့နေနှစ်ဦးပါတဲ့ခင်ဗျာ။
ဒီတော့မှပဲ တပည့်ကျော်တွေ ဇာတ်ရည်လည်ပြီး ဂဠုန်စောဟာ သူ့လိုအင်ဆန္ဒသက်သက်အတွက် မိမိတို့ကိုဓားစာခံ, လက်ပါးစေ, လက်ကိုင်ဒုတ်အဖြစ် အသုံးချခဲ့တာလို့ သဘောပေါက်ကုန်ကြသတဲ့။ ဂဠုန်စောကို သူ့တပည့်တွေက စိတ်လည်းနာ၊ အသဲလည်းနာ၊ နှလုံးလည်းနာ၊ ရှိရှိသမျှအားလုံးနာကုန်ကြသတဲ့။
ထူးထူးခြားခြား သင်ခန်းစာကို ပေးခဲ့သူနှစ်ယောက်က မောင်စိုးနဲ့စိန်ကြီး..။
မောင်စိုးပြောခဲ့တာက “ဂုဏ်ရှိတဲ့ အထက်တန်းလူတယောက်နဲ့ တွဲဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စမှာ ပူစရာမရှိပါဘူး။ သူ့ဘာသာ
ကြည့်လုပ်သွားလိမ့်မယ်” တဲ့..။ မောင်စိုးပြောတာ အမှန်ပါပဲ။ ဂုဏ်ရှိတဲ့အထက်တန်းလူ ဂဠုန်စောက သူဘာသာသူ ကြည့်လုပ်သွားတာပါပဲခင်ဗျား။
စိန်ကြီးကတော့ တမျိုးတဘာသာခင်ဗျ။ ဂဠုန်စောနောက် မလိုက်ချင်လို့ အကြိမ်ကြိမ်ရှောင်ခဲ့ပါရဲ့။ နောက်ဆုံးမိဘ
နှစ်ပါးရဲ့ဆန္ဒကို မငြင်းရက်လို့ ဂဠုန်စောနောက်ပါသွားရတာ။ ကြိုးစင်ပေါ်တက်ခါနီး သရဏဂုံတင်တဲ့အထဲ သူကမပါဘူးတဲ့..။ “ဒီဘ၀ဒီလောက်အဖြစ်ဆိုးတာ၊ ရှေ့ဘ၀တွေမှာ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စမ်း။ လွှတ်ထားလိုက်မယ်” တဲ့..။
ဆောင်းပါးတပုဒ်ပြီးသွားပြီ။ သက်ဆိုင်သူများအတွက် ၀တ္တရားကျေသွားပြီမို့ ကျနော်ကိုယ်ဖျောက်ဝိဇ္ဇာ စိတ်လက် ပေါ့ပါးသွားပါပြီခင်ဗျား။ အားလုံး … အားလုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ စစ်အာဏာရှင်သန်းရွှေ အသုံးချခံရတာကို
ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး အပါယ်ကျခြင်းမှ လွတ်ကင်းနိုင်ကြပါစေသတည်း။ ။
NLD.LA.JB မှဂျပန်ရောက်မြန်မာများသို့ အရေးပေါ်အခြေ...
Human Rights Council holds Interactive dialogue wi...
ကိုယ်ဖျောက်ဝိဇ္ဇာ၏ ကိုယ်ဖျောက်ဝိဇ္ဇာ (အာဇာနည်နေ့ဇာတ်...
တပင်ေ႟ရွှထီး (၁၅၃၁ - ၁၅၅၀) နဲ့အတူ လက်တွဲပြီး ဒုတိယအကြိမ် မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည် စည်းလု